USomlomo ubengakasithathi isinqumo ngesicelo se-EFF | News24
Parliament – Usomlomo wePhalamende uBaleka Mbete akasithathi kancane isicelo se-Economic Freedom Fighters (EFF) sokuba lusondezwe usuku lokudingida isiphakamiso sokungethenjwa kobuholi bukaMengameli Jacob Zuma, njengoba ‘enqaba okwehla esikhundleni’ nakuba i-ANC imcela ukuba asesule.
UMbete wamemezela ukuthi kuzodingidwa ngesiphakamiso ngoFebhuwari 22, ngemuva kosuku lwesabelomali.
OLUNYE UDABA: Izovela enkantolo indoda esolwa ngamacala okugwaza
Kodwa i-EFF yabe isicela ukuba lusondezwe lolu suku ngemuva kokuba ‘zingaphumelelanga’ izingxoxo ezidonse isonto lonke phakathi kukaMengameli Zuma nomengameli we-ANC uCyril Ramaphosa zokuba ehle esikhundleni.
Amaqembu aphikisayo athi ukungaphumeleli kwezingxoxo kwenza uRamaphosa abukeke entekenteke
I-ANC ibize umhlangano ophuthumayo we-NEC ngoMsombuluko ukudingida ngekusasa likaMengameli Zuma.
I-ANC kuthiwa ifuna kube iyona ezixazululela lolu daba, ngaphandle kokusizwa ngamqembu ephikisayo.